SAMOTALIS: SICIR BARARKA, ZAADKA IYO QIIMAHA DOOLARKA
SICIR BARARKA, ZAADKA IYO QIIMAHA DOOLARKA
Waxaa ayaamahan Wasaaradda Maaliyaddu ku hawlantay la-dagaalanka sicir bararka oo ah hadaf weyn una baahan in bulshada loo iftiimiyo danta ku jirta iyo culayska laga dulqaadaayo. Waxa ayaan darro ah in warbaahinta dalku ayna danaynin waxa sida tooska ah u taabanaaya nolosha muwaadinka. Mucaaridkuna noqday mid aan dhaafsanayn dan shakhsi keliya oo kursi loo doonaayo. Laga hadlimayo waxa dadka loo qaban doono, lagana hawl gali maayo waxa hadda socda. Ma lihi ha laga baxo xukun doonka mucaaridka oo waa mid qaranku u dhisan yahay, laakiin mucaaridku ha la yimaado barnamajyo ummadda wax tara, hana ka qayb qaaaan kuwa socda ee ummadda lagu hormarinaayo, hadduu dhaliil u hayana ha keeno dhaliisha oo wadata toosinteeda.
Maanta waxaan wax ka odhan doonaa sida loogu baahan yahay in qiimaha doolarka ee cunaha iskaga keen duubay aynu iskaga furno.
Waxa xukuumad ahaan lagu dhaqaaqay arrin aad u wacan oo ahayd in lala dagaalamo sicir bararka curyaamiyey nolasha danyarta oo waliba ah mid aynu inagu si toos ah u abuurnay oon lahayn sal nidaam dhaqaale bal se ku yimid talo xumo aan la qorshayn. Arrintaas waxa muuqata in la xagal daacinaayo oo cid dano gaar ah lihi carqaladeynayso.
Waxay ahayd bilow wacan in ZAADka iyo lacagaha kale ee electronic ahi noqdaan qaar ah Shilinka Soomaliland.
· Taas waa in lagu qasbaa oon sinaba looga yeelin xal dhexe oo oggolaanay inay isbarbar socdaa mid doolar ah iyo mid shilin ihi, waayo cidina ma qaadanayso kan shilinka ah oo dadku waxay u barteen doolar.
· Teeda kale waa in xukuummaddu cashuuraha iyo biilasha kale dhammaan ku qaadaa Shilin, kuna bixisaa shiln.
· Waa in wax kasta lagu kala iibsadaa shilinka. Kuna qasabtaa in lacagta wax lagu kala iibsanayaa dhmmaan meel kasta ay ahaataa shilinka.
· Qandaraas iyo shaqooyinka muwaadin iyo ajanabiba dhammaan waa in lagu bixiyaa laguna xayeysiiyaa shilinka Somaliland
Ma dhici karto inuu kolna hoos u dhaco qiimaha dolarku waayo lacagta dalka ayey noqotay oo kolka khrash kordhaba iyo kolka dhaqaale kordhaba waxa kordhaya dalabka doolarka. Lamana jabin karo oo dalabkiisa ayuunbaa sii kordhaaya.
Arrintani waxay dhib weyn ku haysaa shaqaalaha xukuumadda, ciidamada, iyo dan yarta guud ahaan, waana dadka loo baahan yahay in la dhowro nolashooda, lana taakuliyo. Waa mid dalka dhaqaalihiisa kor u qaadaysa kolka lacagta dalka ee aynu inagu tooska u maamulnaa yeelato qiimo ka sareeya kan manta.
Lacagteena dalka gudihiisa ku noqotay lacag ajnabi, kolka tii ajanabiga ahyd noqotay mid qaran, waa nidaam halis ku ah caafimaadka dhaqaale, oo ka baxay xakameynta xukuumadda. Marna lama maareyn karo sicir bararka ilaa lacagta qaranku hesho maqaamka ay leedahay.
La-taliyaha Madaxwynha ee
Dhaqaalaha, Ganacsiga, iyo Maalgashiga
Labels: AHMED ARWO, ECONOMY, Maqaalada Ahmed Arwo, NEWS, POLITICS, Somaliland